ချစ်ပဲချစ်တတ်ခဲ့တာ သိပ်ကို ချစ်တတ်ခဲ့တာ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုချစ်ပြရမလဲ မသိခဲ့ဘူး – Shinyoon
ချစ်မပြတတ်တဲ့ ကောင်မလေး ….
သိပ်ချစ်တတ်တယ် ဒါပေမယ့် ဘယ်လောက်ချစ်တတ်တဲ့အကြောင်းမပြောတတ်ဘူး မပြတတ်ဘူး သိပ်စိတ်ပူတတ်တယ် စိတ်ပူနေတဲ့အစား ဒေါသတွေပဲ ထွက်ပြတတ်တာပေါ့ သိပ်ပြီး မနူးညံ့ပြတတ်ဘူး ကျရတဲ့မျက်ရည်တွေရှိပေမယ့်လဲ ဘယ်တော့မှ သူ့ရှေ့မငိုပြခဲ့ဘူး
ချစ်ပဲချစ်တတ်ခဲ့တာ သိပ်ကို ချစ်တတ်ခဲ့တာ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုချစ်ပြရမလဲ မသိခဲ့ဘူး နေကောင်းအောင် နေပါလို့ပြောတတ်တယ် နေမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါ စိတ်ပူတတ်တယ် ဒါပေမယ့် အရမ်းကြီး ဂရုမစိုက်တတ်ဘူး သူနာနေတာထက် ကိုယ်ပိုပြီးနာရတတ်တာကိုတာ့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ သိပါတယ်
မပြောပြတတ်ခဲ့တာပေါ့ ဘယ်လောက်ထိချစ်ပါတယ်ဆိုပြီး စကားအလှတွေ မသုံးတတ်ခဲ့တာပေါ့ ကိုယ်နာကျင်ရတာကို မဖော်ပြတတ်ခဲ့တာပါ … ချွဲပြီး နွဲ့ပြီးမပြောတတ်ခဲ့ဘူး ကျွန်မ ခံစားနေတာထက်ပိုပြီး မဖော်ပြတတ်ဘူး ဒါပေမယ့် ပိုသာပြီးတော့ ခံစားတတ်တယ်
ဒါတွေကြောင့်ပဲ ကျွန်မကို မချစ်တတ်ခဲ့ဘူးလို့ ထင်သွားကြတာပါ ….သိပ်ချစ်ပေမယ့်လဲ ချစ်ကြောင်းမပြတတ်ခဲ့ဘူး စိတ်ပူပေမယ့်လဲ စိတ်ပူတယ်လို့မပြောတတ်ခဲ့ဘူး ကိုယ်ခံစားရတာကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲသိရင်းနဲ့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ ကျန်ခဲ့တာပါ …
မချစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော် ရှင့်တစ်ယောက်တည်းကိုပဲ သိပ်ချစ်ခဲ့တာပါ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုချစ်ပြရမလဲ ကျွန်မ မသိခဲ့ဘူး …
ခ်စ္မျပတတ္တဲ့ ေကာင္မေလး ….
သိပ္ခ်စ္တတ္တယ္ ဒါေပမယ့္ ဘယ္ေလာက္ခ်စ္တတ္တဲ့အေၾကာင္းမေျပာတတ္ဘူး မျပတတ္ဘူး သိပ္စိတ္ပူတတ္တယ္ စိတ္ပူေနတဲ့အစား ေဒါသေတြပဲ ထြက္ျပတတ္တာေပါ့ သိပ္ျပီး မနူးညံ့ျပတတ္ဘူး က်ရတဲ့မ်က္ရည္ေတြရွိေပမယ့္လဲ ဘယ္ေတာ့မွ သူ့ေရွ႕မငိုျပခဲ့ဘူး
ခ်စ္ပဲခ်စ္တတ္ခဲ့တာ သိပ္ကို ခ်စ္တတ္ခဲ့တာ ဒါေပမယ့္ ဘယ္လိုခ်စ္ျပရမလဲ မသိခဲ့ဘူး ေနေကာင္းေအာင္ ေနပါလုိ ့ေျပာတတ္တယ္ ေနမေကာင္းျဖစ္တဲ့အခါ စိတ္ပူတတ္တယ္ ဒါေပမယ့္ အရမ္းၾကီး ဂရုမစိုက္တတ္ဘူး သူနာေနတာထက္ ကိုယ္ပိုျပီိးနာရတတ္တာကိုတာ့ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ပဲ သိပါတယ္
မေျပာျပတတ္ခဲ့တာေပါ့ ဘယ္ေလာက္ထိခ်စ္ပါတယ္ဆိုျပီး စကားအလွေတြ မသံုးတတ္ခဲ့တာေပါ့ ကိုယ္နာက်င္ရတာကို မေဖာ္ျပတတ္ခဲ့တာပါ … ခြ်ဲျပီး ႏြဲ႕ျပီးမေျပာတတ္ခဲ့ဘူး ကြ်န္္မ ခံစားေနတာထက္ပိုျပီး မေဖာ္ျပတတ္ဘူး ဒါေပမယ့္ ပိုသာျပီးေတာ့ ခံစားတတ္တယ္
ဒါေတြေၾကာင့္ပဲဲ ကြ်န္္မကို မခ်စ္တတ္ခဲ့ဘူးလိုု့ ထင္သြားၾကတာပါ ….သိပ္ခ်စ္ေပမယ့္လဲ ခ်စ္ေၾကာင္းမျပတတ္ခဲ့ဘူး စိတ္ပူေပမယ့္လဲ စိတ္ပူတယ္လို့မေျပာတတ္ခဲ့ဘူး ကိုယ္ခံစားရတာကို ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ပဲသိရင္းနဲ႕ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ပဲ က်န္ခဲ့တာပါ …
မခ်စ္ခဲ့တာမဟုတ္ဘူးေနာ္ ရွင့္တစ္ေယာက္တည္းကိုပဲ သိပ္ခ်စ္ခဲ့တာပါ ဒါေပမယ့္ ဘယ္လိုခ်စ္ျပရမလဲ ကြ်န္မ မသိခဲ့ဘူး …
စိတ်ချင်းဝေးကြတာထက်စာရင်လူချင်းဝေးရတာကို ပိုပြီးတော့ ကောင်းပါတယ်